‘प्याडम्यान’ पछि अक्षयकुमार ‘मिल्कम्यान’ बन्ने ! – Medianp
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, फागुन ०१, २०७४१२:२२0
काठमाडौं, १ फागुन । फिल्म ‘प्याडम्यान’ मा अक्षयकुमारले पर्दामा अरूणाचलम गुर्गनन्थमको जिन्दगीलाई उत्कृष्ट तरिकाले निभएका छन् । अअक्षयको यो फिल्मले प्रशंसा बटुलिरहेको छ । फिल्मले बिजनेस पनि राम्रो गरिरहेको छ । ‘प्याडम्यान’ पछि अक्षयकुमारलाई एक बायोपिकमा काम गर्ने अफर आएको छ ।
त्यो फिल्ममा अक्षय ‘मिल्कम्यान’ बन्न सक्नेछन् । ‘मिल्कम्यानको नामबाट चिर्चित डा. र्वीस कुरियनको जिवनीमा आधारित फिल्ममा मुख्य भूमिकाको अफर अक्षयलाई आएको बताइएको छ । एकता कपूरले डा. वर्गीस कुरियनको जिवनीमा आधारित किताबको राइट्स किनेकी छन् ।
यो फिल्मको मुख्य भूमिकामा अक्षयलाई लिने एकताको चाहाना रहेको बताइएको छ । अक्षय पनि यो भूमिकाका लागि सकारात्मक रहेको बताइन्छ । उनले हालै ‘ट्वाइलेट एक प्रेम कथा’ र ‘प्याडम्यान’ जस्ता सामाजिक मुद्धामा आधारित फिल्म गरेका छन् । जसलाई दर्शकले औधी रूचाएका छन् । एजेन्सी
नेपालमा लगानी गर्न बेलायतलाई अाेलीकाे अाग्रह